Kedu otu esi azụta ihe n'ịntanetị? | ECommerce ozi ọma
Kedu otu esi azụta ihe n'ịntanetị?
Jose Ignacio | | eCommerce, Nche
Shoppingzụ ahịa n'ịntanetị abụrụla otu n'ime omume ndị gbanwere oriri na ụwa. Ruo n'ókè na ọ dị oke ụkọ na mmadụ azụtaghị akwụkwọ, ekwentị mkpanaaka ma ọ bụ ngwaọrụ ọ bụla nke teknụzụ site na ọwa ahịa a dị ike. Ebe otu ebumnuche maka ndị ọrụ bụ ịhazi ihe ịzụrụ echedoro site n'echiche niile.
N'ime usoro a na oriri, ọ dị mkpa iji mesie ya ike na a ga-ebubata ọtụtụ usoro iji zụta ihe ịzụrụ n'enweghị nsogbu ma nwee ntụkwasị obi. Site na nke a, ọ dị mkpa na site ugbu a gaa n'ihu na tupu ịzụta, gbaa mbọ hụ na ụlọ ọrụ dị n'ịntanetị nwere ntụkwasị obi zuru oke. Iji mee nke a, ị ga-ele anya na kọntaktị ngalaba iji nyochaa adreesị anụ ahụ gị, ọrụ ndị ahịa, oge, ma ọ bụ ntụaka, n'etiti ụfọdụ akụkụ ndị kachasị mkpa iji lebara anya.
Njikọ a ga - eche nche ga - abụ otu n’ime ngwa ọgụ ị ji n’aka iji mezuo ebumnuche a. N’ihi na n’eziokwu, ọ ga-aka mma ime ya n’ụlọ anyị ma ọ bụ nke onye ikwu anyị. Ijikọ site na ebe ọha (dịka ọdụ ụgbọ elu, họtel, ma ọ bụ ebe ọ bụla ọzọ) nwere ike ọ gaghị adị mma, ebe ọ bụ na ị maghị onye ga-enyocha njikọ ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ.
1 Shoppingzụ ahịa nchekwa: nchekwa nke ịkwụ ụgwọ
2 Chọọ edere aha nke ụlọ ọrụ dijitalụ
3 Ndị ọzọ dị mkpa nchekwa
4 Nlezi anya dị ukwuu na ntanetị
5 Nyochaa ngwaahịa a
6 Shoppingzụ ahịa n'ịntanetị
7 Mmekọrịta azụmahịa n'ịntanetị
Shoppingzụ ahịa nchekwa: nchekwa nke ịkwụ ụgwọ
Nzọụkwụ mbụ bụ ịhọrọ maka usoro ịkwụ ụgwọ echedoro. Ezigbo ihe atụ bụ PayPal ma ọ bụ ndị ọzọ yiri àgwà. Ọ bụghị n'efu, site na usoro ịkwụ ụgwọ ịntanetị ha na-ezo aka gị na nyiwe ezoro ezo n'oge ịkwụ ụgwọ ahụ. Nwere ike ịkwụ ụgwọ ma ọ bụrụ na ihe adaba na nzụta, ma ọ bụ na ntụle, ọ bụ ihe anyị na-eche, dịka ihe mmezi nchebe ọzọ ga-aba nnukwu uru na-abụghị oge ndị a.
Ọ bụ ezie na n'aka nke ọzọ, ịdebe sistemụ arụmọrụ gị yana antivirus emelitere mgbe niile ga-abụ otu n'ime usoro kachasị dị irè ị nwere n'oge a. Dị ka antivirus gị, a ga-emelite ha mgbe niile na ụdị kachasị dịnụ. Naanị mgbe ahụ ka ha ga-adị njikere iche egwu ndị kachasị adị, na-ezere ihe egwu ọ bụla na onye ọrụ. Ebee ka otutu ihe itufu gi ma oburu na i ghaghi ichota ihe ndia.
N'ezie, ọzọ nke igodo iji mezuo usoro nche a nke ị ga-eburu n'uche site ugbu a gaa n'ihu bụ na ezoro ezo na ozi ahụ SSL nchekwa akwụkwọ. Asambodo a bụ nke a na-apụghị imeri emeri, ya mere, ọ ga-echebe data anyị site na ọnụnọ achọghị nke ndị ọzọ. Dị ka ihe atụ nke ihe ị nwere ike ịmepụta iji kpuchido ịzụrụ ihe na ntanetị n'ịntanetị.
Chọọ edere aha nke ụlọ ọrụ dijitalụ
Akụkụ ọzọ nke na-ekwesịghị ịhapụ bụ nke metụtara ntinye aka na weebụsaịtị ma ọ bụ ụlọ ọrụ dijitalụ n'onwe ya. N'echiche a, ọ bara uru na tupu ịzụrụ ya, gbaa mbọ hụ na ụlọ ọrụ nwere ntụkwasị obi. Lee anya na kọntaktị ngalaba iji lelee adreesị anụ ahụ gị, ọrụ ndị ahịa, oge, ma ọ bụ ntụaka ...
Dị ka eziokwu ahụ bụ na ị nwere ike ịkpọtụrụ ndị enyi na ndị ezinụlọ gị ndị zụtarala na saịtị ahụ oge niile, ma nwee ezigbo ahụmịhe ma ọ bụ nyere gị aka nyocha banyere ụlọ ọrụ ahụ. Ihe ndị a bụ ụfọdụ ndụmọdụ dị mkpa na nke dị mkpa onye ọrụ ọ bụla kwesịrị icheta tupu ịzụrụ ihe n'ịntanetị. Ọ bụrụ n ’iburu ha n’uche, ihe gbasara nke puru ịbụ onye a ghọgburu agaghị enwe isi. Ya mere, na a na-eme usoro ahụ dum na nkenke na nchekwa ma ọ nweghị ihe ọ bụla nwere ike imetụta ịme ụdị ịzụta ndị a n'ịntanetị.
Ndị ọzọ dị mkpa nchekwa
Zụta ntanetị taa dị mma. Naanị anyị ga-akpachara anya ma họrọ ụdị ịkwụ ụgwọ kwesịrị ekwesị n'ọnọdụ nke ọ bụla. Dịka ọmụmaatụ, site na usoro mmemme anyị ga-ekpughere gị n'okpuru:
N'etiti ndụmọdụ kachasị mma, eziokwu nke ịmegharị ngwaọrụ gị tupu ịzụrụ ihe dị elu karịa ihe niile. Ọ bụ ihe amamihe dị na ịwụnye antivirus ịchịkwa nje ndị nwere ike ịnakọta ozi nkeonwe na ozi gbasara ego na ngwaọrụ. Ọzọkwa, software arụnyere na ngwaọrụ ga-ruo ụbọchị.
Jiri njikọ dị nchebe. Zere ịzụta iji netwọk Wi-Fi ọha na eze, n'ihi na ha anaghị enye nkwa ọ bụla nke nchekwa.
Chọọ maka ụlọ ahịa dị n'ịntanetị nke adreesị ha malitere na HTTPS ma gosipụta mkpọchi na ogwe adreesị. Nke a na-achota na ozi a na-ebute site na ezoro ezo.
Nyochaa ozi nke ụlọ ahịa dị n'ịntanetị nyere: onye ha bụ, ebe ha nwere adreesị ụtụ isi, ihe data ha na-anakọta n'aka ndị ọrụ yana maka ebumnuche, ụzọ ịkwụ ụgwọ ha na-enye, mbupu na nloghachi iwu.
Jụọ maka ụlọ ahịa na engines ọchụchọ, netwọkụ mmekọrịta na ọgbakọ. Lele echiche nke ndị ọrụ ndị ọzọ nwere banyere ya nwere ike inye ọtụtụ ozi.
Ọ bụrụ na ị nwere obi abụọ gbasara ntụkwasị obi nke ụlọ ahịa dị n'ịntanetị, ọ ka mma ịhapụ ịzụrụ ma chọọ ihe ọzọ.
Nlezi anya dị ukwuu na ntanetị
Agaghị na cafes ịntanetị, ọba akwụkwọ ma ọ bụ saịtị ndị yiri ya, site na netwọkụ Wi-Fi nke ụlọ ọrụ na-enye ndị ahịa ha ọrụ a, ebe ọ nwere ike itinye akụ na ụba gị ma ọ bụ data ego gị n'ihe egwu. Iji nweta ahụmịhe, ana m akwado ịzụrụ site na saịtị ndị ama ama ma tụkwasị obi dịka eBay, Amazon, Fnac, Privalia, Groupon, wdg You nwekwara ike ịzụta site na saịtị ndị ọzọ n'ezie ... mana gbaa mbọ hụ, onye nọ n'azụ peeji ebe ị chọrọ ịzụ, na ụlọ ọrụ ma ọ bụ onye na-akpali obi ike na gị.
Nyochaa ngwaahịa a
Biko jiri nlezianya gụọ nkọwapụta ngwaahịa ahụ. Lelee ezigbo ebipụta iji hụ ọkwa nke ngwaahịa ị na-azụ.
N'aka nke ọzọ, ị ga-enwerịrị doro anya na ụgwọ ikpeazụ. N'oge a, ụfọdụ ụlọ ọrụ gụnyere ụgwọ nke mbupu, nhazi, wdg na ọnụahịa ndị ọzọ na-agbakwunye ya na njedebe mgbe ị kpebiri ịzụrụ, nke a na-adịkarị ọnụahịa ị chere na ị ga-akwụ maka ngwaahịa ahụ.
Azụtala n'ebe usoro ịkwụ ụgwọ na-ezipụ ego ma ọ bụ nyefe ego.
Lelee kedu ka iwu siri dị na nloghachi, ịkagbu akagbu, ụbọchị na usoro nnyefe
Ọ bụrụ na n'ikpeazụ, mgbe ngwaahịa ahụ rutere, ị chọpụta na ọ bụghị afọ ojuju gị, ị nwere ike iweghachi ihe ahụ ma weghachite ego ahụ? N'ihi na ihe dị na njedebe nke ụbọchị bụ na ị nweghị mmetụta na azụmahịa azụmahịa. Ka i wee nwee ike ịkwaga n'enweghị nsogbu na ụdị ọrụ a.
Shoppingzụ ahịa n'ịntanetị
Onu ogugu ndi mmadu na eme ihe ha na ntanetị na abawanyela na nso nso a, omume nke egosiputala na obodo ndi ozo di iche. Banyere obodo Valencian, dị ka otu nnyocha nke El Observatorio Cetelem eCommerce 2019 mere, ndị Valencians ndị zụtara n'ịntanetị na ọnwa ndị na-adịbeghị anya ejiriwo ihe ruru 1.532 euro na ịzụrụ ihe n'ịntanetị, 27% dị ala karịa nkezi mba (euro 2.098) ). Ọmụmụ ihe, n'okpuru aha «Ndị ahịa amamịghe. The Spanish n'ji jikọọ na smart zuo«, Nyochaa mmasị ndị ahịa mgbe ịzụrụ ihe n'ịntanetị. N'etiti ngwaahịa ndị Valencians na-achọkarị na ịntanetị, ihe ndị a pụtara: oge ​​ntụrụndụ, yana 70% nke njirisi; soro njem, na 67% na ejiji, na 61%.
Ma ọ bụ ezie na àgwà ndị Valencians na-eme ka ha zụta ihe dị n'ịntanetị dị ezigbo mma, ọmụmụ ihe ahụ na-egosipụtakwa akụkụ ụfọdụ ndị ahịa na-aghọta dị ka ihe na-adịghị mma mgbe ha na-azụ ihe, ebe 54% kwetara na ha na-ahọrọ ịhụ, metụ na detụ ire ngwaahịa na ọnọdụ, 40% na-akatọ ọnụ ahịa mbufe dị elu na ụfọdụ ihe ma ụfọdụ ụfọdụ na-eche ogologo oge mgbe ị na-enweta ngwa ahịa na-eme ka onye ọrụ ahụ họrọ ịga ụlọ ahịa ahụ ozugbo.
Mmekọrịta azụmahịa n'ịntanetị
N'aka nke ọzọ, a ghaghị imesi ya ike na azụmahịa agbanweela site na azụmahịa mbụ n'ịntanetị nke 90s ruo ugbu a. Nkà na ụzụ abụwo isi ụzọ na mgbanwe na mpaghara a. Na ụzọ mgbanwe a, amụma na-egosi na ọgụgụ isi (AI) bụ teknụzụ nke ga-emetụta nnukwu eCommerce, dị ka Gartner si kwuo. A na-eme atụmatụ na site na 2023 ọtụtụ ndị otu na-eji AI maka azụmahịa dijitalụ ga-enweta ma ọ dịkarịa ala mmelite 25% na afọ ojuju ndị ahịa, ego ha nwetara ma ọ bụ mbelata ego.
Nyochaa onye na-azụ ahịa, wepụ uru agbakwunyere na data ndị ahịa ma ọ bụ ịmepụta ahụmịhe ahaziri iche n'oge njem ndị ahịa bụ ụfọdụ n'ime ọnọdụ ndị e-commerce nakweere iji meziwanye akara ala. Maka akụkụ ya, mmejuputa nke Big Data na Business Intelligence na-enye ogo kachasị nke njikarịcha maka nyocha zuru ezu nke data na ikike iji wepụ uru bara uru na ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » eCommerce » Kedu otu esi azụta ihe n'ịntanetị?
Esi eweputa ihe oyiyi na WordPress?
Nddị nke ga-emetụta ọdịnihu nke azụmahịa kọmputa